नागरिक सर्वोच्चताले जन्माएको खेलाडी
के वर माग्न ...... ?
सगरमाथा, माउण्ट एभरेस्ट कि नौबन्धन
नौलौ पानाको शुरवात !!
कामरेडलाई सरकार किन चाहियो ?
यो देख्नु वा सुन्नु परेको भए कार्ल मार्क्स रूँदा ...
लेखक:- विजयकुमार श्रेष्ठ
नेपाललाई सतिले सरापेको देश भनेर पाका नेपालीको मुखबाट सुन्न पाएका थियौ कुनै बेला त्यस्तो शब्दको पछि लाग्ने हो भनेर नकरात्मक कुरो गर्‍यो भनेर कुनै बेला गालि गर्नसम्म पछि परेका थिएनौ। कहिले मल्लहरुको पालो,कहिले पाण्डेहरुको पालो, कहिले निरङकुशताको त कहिले शाहहरुको पालो । यस्ता पालै पालोको शासन र शासकहरुको थिचो मिचोले गर्दा नेपालीहरुमा विकान्शोमुश भएर प्रफुल्ल रुपमा आफुमा भएको कला कौसलताको प्रदशन गर्न सकेका थिएनन् । सारा थिचोमिचोको बाबजुत असहिय भएर परिवर्तनको नारालाई बुलन्द पारेर हाते मालो गरेर शासकिए शासनबाट मुक्ति पाउनको लागि देशमा ठुलो क्रान्तिको सुरुवात भयो । सारा नेपालीमा सामन्ति शासनको आगो भित्र भित्रै दन्कि रहेको थियो र छिटै नै देशमा परिवर्तनको प्रत्याभुती नपाली जनताले पाउन सफल भए ।
सत्ता प्राप्तिको सफलतासँगै नेताहरुले पार्टिको विजारोपण गराउन थाले । ठुला दलको नामले चिनीन गयो नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दलको नामले चिनीन गयो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि माले । रात रहयो औराख पलायो भन्ने उखानलाई सावित गर्दै को भन्दा को कमको होडवाजि हुन थाल्यो र देशमा एकले अर्कालाई विभिन्न लान्छना लगाउदै आफनो शक्ति प्रदर्शन गरि आफनो आफनो पहुंचमा पार्टि खोल्ने फुटाउने कामको सृजना हुन गयो । हरेक पार्टिमा बैचारिक मतभेतको रोगले जरा गाड्न थाल्यो । आफनो घरमा धमिरा
लगाउन कम्मर कसेर अघि बढे । सिङ्गो एउटा कम्युनिष्ट पार्टि फुटेर सयौ चिरामा विभाजन भयो । हरेक पार्टिमा भिन्दा भिन्दै धारको गुटवन्दिको राणनिती हुन गयो । हिजो एक जोर चप्पल किनेर लगाउन नसक्ने नेता भनाउदाहरु राता रात अरवौ पति भएर सिंह गर्जे जसरि गजिर्न थाले । भोकाएर बसेको बाघ जसरि जस्ले सके उसैले आफनो थैलो भर्ने तिर लाग्यो । परिवर्तनको केहि महिना पछाडि नै व्याक्तिबाद लादेर नेताहरुको परिवर्तन आकसिदो तरिकाले हुन थाल्यो । बहुदलिय प्रजातन्त्रको रसस्वादन नेताहरुले मज्जाले लिए । केहि वर्षपश्चात बहुदलिय प्रजातन्त्र पनि नेपाली जनतालाई बोकालाई कुभिण्डो भने जस्तै हुन गयो । नाम मात्रको सत्ता परिवर्तन भयो । शासन र शासकमा परिवर्तन भने भएन । देशमा झन बिकराल परिस्थितीको जरा गाड्न थाल्यो । अन्याय र अत्याचारले सिमा नाग्न थाल्यो ।
जनतालाई फेरि पनि अर्को आन्दोलनको शुरुवातको जरुरी पर्नगयो । बहुदलवादिमा जनताको शासन हुन सकेन । लोकलाई असहिय भयो र लोकतन्त्रको प्राप्तिको लागी नारा घन्किन थाल्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि माओवादि न्यायको खोजीमा जंगल पसे । जनताको नोकर भएको भनेर न्याय निसावको कसि बोकि जंगलबाट आफना बाहुल्यता देखाउन तिर लागे जता ततै र्सवहाराको नारा घन्काउन थाले । संघर्षको सिमा रहेन । कठोर भन्दा कठोर आन्दोलनको शुरुवात गरे । असोचनिय भयानक संघर्ष लडदै लड्दै परिवर्तनको खाका बोकेर हिड्न थाले । र्सवहारा वर्गको शासन हुनु पर्छ भनेर साम दाम दण्डभेद लगाएर आफनो क्रान्ति जारि राखे । दश वर्षो लामो कष्ट पछि माओवादि जनता सामु प्रत्यक्ष प्रस्तुत भए । केहि हदसम्म दिन दुखिहरुको सहारा भएर अघि बढे । संसद भवन भनेको बुर्जुवाहरुको ठगि खाने अखडा हो भनेर चर्का नारा लगाउने र्सवहाराका नेताहरु आफनो त्याग र बलिदानलाई चटक्क भुलेर बुर्जुवाहरुको खालमा हातेमालो गर्न सहमति भए । जनताको लागी चर्का नारा बोकेर हिडेका माओवादि बुर्जुवाहरुको खालमा पसेर सारा कुरालाई अहेस आराममा विलीन गराउन पछि परेन । सभा सम्मेलनमा आफनो बोलीको लगाम खुकुलो पार्ने र जब सभाबाट बाहिरिन्छ सहमतिको नारा लिएर एक अर्कामा तारे होटलको स्वाद चाख्नलाई चुस्त बनेर हिड्ने गर्न थाले ।
सारा नेपाली जनताको सहभागितामा नौलो क्रान्तिको आगो दन्किन थाल्यो र केहि दिनको सर्घषले देशमा लोकतन्त्रको बहाली हुन गयो । नयाँ नेपालको सुरुवात गर्ने तिर सबैदलहरु अगाडि बढे । नयाँ नेपाल बनाउनको लागी नयाँ सविधानको आवश्यकता पर्ने भएकोले सविधान सभाको घोषण गरेर सभासदको निर्वाचन गराउने प्रकृया अगाडि सारियो । देशमा भएका सबै दलले आफनो आफनो हिसावले चुनावि मैदानमा आफना र्समथकलाई खडा गराए । सारा नेपालीको एउटै कौतुहल थियो नयाँ पार्टि नयाँ व्याक्तिलाई चुनेर देश र जनताको भविष्य उज्वल हुन्छकि भन्ने अभिलाषाले गर्दा नेपाल कप्युनिष्ट पार्टि माओवादिलाई जनताले भारि मतले सविधानसभाको निर्वाचनमा विजय हासिल गराएर देशमा सबै भन्दा ठुलो दलको दर्जा भिराउन सफल भए । हामी त चुनावी खेल खेल्ने पार्टि होईन भनेर जनतालाई घुरक्याउने पार्टिले चुनावमा भाग लिएर आफनो बर्चस्सो जमाउन सफल भए । नेपाली जनताले अब त आन्नदको सास फेर्न पाउने भए भनेर आफनो कुटो कोदालो आन्नदसँग चलाउन थाले । चुनाव सकियो सरकारको गठन भयो । राष्ट्रपति नेपाली काग्रेसले पाउन सफल भयो,उपराष्ट्रपति मदेशि जनधिकार फोरमले चयन गर्न पायो । प्रधानमन्त्रि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि माओवादिले पायो । सरकार चलाउने जिम्मा सोहि पार्टिका अध्यक्ष पुष्प कमल दहालको कादमा पर्न गयो । देशमा नौलो विहानीको शासन सुरु भयो भनेर जनता रमाउन थाले । सुरुका दिनमा जनतालाई दिएको वाचा बन्धन देखाउन लागेका थिए । तर के गर्नु त्यो ठाउँ भनेको कस्तो हो कस्तो कुर्सीमा बसेर कुर्सी तताउन नपाउदै भोग विलासको भुतले गाज्न थाल्यो । नाताबाद र क्रिपावादको चर्को विरोध गर्नेले पहिलो प्राथमिकता त्यसैलाई दिन थाले र अहेस आरामी जिवनमा परिर्वतन हुन थाले । मिलीजुली सरकारमा आफनो मात्र निसाना वाजि लगाउन पछि परेन । हरेक कुरामा आफनो पार्टिको निर्णर्यलाई मान्यता दिन तिर लागे नयाँ नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्रि । आफनो बोलीमा आङकुसे लगाउन सक्नु भएन ।
हिजो जनतालाई दिलाएको विश्वास माटोमा विलीन बनाउन सफल हुनु भयो । हरेक क्षेत्रमा परिवर्तनको नारा अगाडि सार्नु भयो । तर कुरा एकातिर काम अर्को तिर हुदै गयो । कहिले अनुभव नभएको भनेर झुक्ने गर्नु भयो कहिले परिक्षणकालमा कमि कम्जोरि त भै हाल्छ भनेर आफु पानि माथिको ओभानो हुनलाई चुक्नु भएन । शासकिय स्वारुप बदल्ने भनेर गएको व्याक्ति हिजोका दिनलाई चटक्क भुलेर नेपालमा कसैले नलिएको विलासितामा रमाउन सफल हुनु भयो । योग्यता विहिन व्याक्तिलाई पद बहालिमा प्रमुख कदम चाल्न सुरु गर्नु भयो । अव जनताले शान्तिको सास फेर्न पाउने छ भनेर नारा धन्काउन पनि पछि पर्नु भएन । सहकार्य सहमतिको विन्दुलाई लत्याएर एक तर्फि शासन गर्न थाल्नु भयो । हिजो जनता सामु गरेका वाचाहरु भुल्न पछि पर्नु भएन । जस्तै सिमा बिबाद,सन्धि हस्ताक्षेर जस्ता ठुला ठुला नारा लिएर गएका व्याक्तिले देशको प्रमुख भएर बस्दा ति कुरा उठाउनमा कम्जोरि हुनु भयो । कहिले के वोल्ने कहिले के बोल्ने गरेर आफनो शासन कालको आयु छोटयाउनु भयो । सरकारको १ वर्ष जती पुर्‍याउन नपाउदै रुख ढले जसरि हुरि वतासको चपेटमा परेर पछारिनु भयो । आफनो पदबाट राजिनामा दिएर पानि माथिको ओभानो हुन माहिर हुनु भयो क्रान्तिकारि नेता । सरकार ढलेको केहि दिन पश्चात फेरि अरु दल मिलेर नेपाली जनताले नपत्याएका व्याक्तिहरुलाई देशको ढुकुटीको चावि सुम्पिन वाध्य भयो । नेपाली जनताले नपत्याएर के भयो र देश चलाउने जिम्मेवारि पाउन सफल भयो रिमोटिए शासकहरुको साथ पाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि एमालेका नेता पुर्व महा सचिव माधवकुमार नेपाल । सतीले सरापेको देशमा के के हुन थाल्यो के के हुन थाल्यो । देशको ढुकुटी रित्याएर चुनाव गराउनुको उपलब्धी हास्सास्पद हुन गयो । माधवकुमार नेपालको सरकारमा सबै जसो मन्त्रिहरु जनताबाट पराजित भएका व्याक्तिहरुको बाहुल्यतामा जम्वो मन्त्रि मण्डल गठन हुन गयो । त्यसैले नेपाली उखान यो लोकतन्त्रमा सबका सब लागु भएर छाडेको छ । भाग्यमा भए डाकोमा दुध दोहे पनि बाहिर जादैन भन्ने उखानले माधवकुमार नेपाललाई साथ दियो । अनि त सुरु भयो रिमोटिए शासन सत्ता सन्चालन । शान्ति सम्झौताको चर्का नारा दिनेहरु एक अर्कामा दोष लगाएर शासन सत्ताको जुहारि खेल्न सुरु गरे । त भन्दा म के कम भन्ने बैमनस्यतालाई सिरोधार्य बनाएर देश सन्चालनमा बाधा व्याबधानहरु खडा गर्न तिर लागे । जब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि एकिकृत माओवादि सत्ताबाट बाहिए अनि समाप्त भयो सहमतिको नारा । त्यस पछि सुरु गर्नु भयो नागरिक सर्वोच्चताको गतिलो नारा बोकेर रक्तपातको आन्दोलन चर्काउन शुरु गर्न तिर लाग्नु भयो । हामीलाई त जनताले चुनेर पठाएको पार्टि हो भनेर धमण्ड एकिकृत माओवादि भित्र भित्रै औडा र डाहाले छटपटाउन थाले । उता सत्ता त्याग्नु परेको रन्कोमा जंगली स्वाभावहरु दोहोर्‍याउन सुरु गरे । फेरि पनि जनतालाई शान्तिले बस्न नदिने परिस्थिती सृजना गर्न तिर लागे । कसैले उसको बारेमा बोलेमा लेखेमा त्यो व्यक्ती असुरक्षित हुन गयो भनेर जाने हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्ने दिन फेरि आयो ।
नेपाली जनताले सविधान निर्माण गर्न भनेर पठाएका सभासदहरु आफना आफना भोग विलासितामा कम्मर कसेर लाग्न सुरु गरे । गरिव जनताको पसिनालाई माटोमा मिलाउन तिर लागे । आफुले पाउने अहेस आरामको पछाडि ढौडन थाले । आफनो परिवारमा मसलन्द खर्च देखि सारा कुराको भर्पाई मन्त्रालयमा प्रस्तुत गराउन पछि परेन । सहमति र सहकार्यमा अल्भिएको कुर्सी मोहको खेल नेपालमा आगो दन्के सरि बल्न थाल्यो । देश र जनताको सेवक हु भन्ने राष्ट्रवादिहरुको फुटवल सुरु भई नै रह्यो । तमासे र लहै लहैमा पछि लागेर हिड्ने बेरोजगारि नेपालीहरुलाई तमासे र दर्शकको पक्तिमा राखेर कुर्सी मोहको जालमा गोल गर्न भनि कम्मर कसेर लागेका छन् । जनतालाई भकुण्डो बनाएर सबै पार्टिले गोल गर्न तिर लागे । सडकमा रत्याउली खेल्न सुरु गरे । लुटपाट हिङसाको फोहरि खेल खेल्न थाले । एक अर्कालाई लडाएर नेता भनाउदाहरु तारे होटलको रस्वादनमा मोज लिन थाले । सरकार चलाउनेहरु सकेसम्म आफना आफना व्याक्तिलाई विश्वमा नै नभएको मन्त्रिमण्डल सृजना गराएर देशको ढुकुटीमा रमाउन व्यास्त भए । प्रतिपक्षले देशमा जनता भनेको त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि एकिकृत माओवादिलाई र्समर्थक गर्नेहरु मात्र हुन् भन्ने एक लौटि मनसाय लिएर सडकमा हार गुहार गर्न तिर लागे । जातिको नाममा देशलाई टुक्रयाउने तिर लाग्न थाले । हिजो अरुलाई बिदेशिको नोकर भनेर भन्ने पार्टिले आज खुले आम देशमा भएको समस्या एक आपसमा छलफल गरेर साम्य पार्नु त कता हो कता सिधै निर्धक्कसँग हामी त बिदेशिसँग मात्र वार्ता गर्र्छौ भनेर फुक्न थाले । अनि के हो त यो हिजो अरु पार्टिका नेताहरु भारत गयो भनेर दलाल भन्नेले आज आफुले मालिक भनेर सम्बोधन गर्न कहाँबाट आट आएको अनि यो कुरालाई कुन बाद भनेर सम्मान गर्नु उपयुक्त होला त - सरकारमा बस्नेले मलाई त बिदेशिको सहयोग मिलेको छ भनेर फुक्ने आफनो सरकारको मन्त्रिले मनपरि गरि हिड्दा कुर्सिको खुट्टा लुलो हुन्छ भनेर दण्डहिनतालाई अङगाली जे मन लाग्यो त्यही फुक्दै हिड्ने अनि प्रतिपक्षमा बस्नेले आफनो जन्म भुमीलाई नोकरको दर्जामा परिभाषित गर्दै हिड्ने । के नेपाली जनताले बहादुरी देखाएर देशको नाम विश्वमा उच्च बनाएको यो नोकर हुनको लागी हो । कस्ले दियो एकिकृत माओबादिको नेतालाई देश र नेपाली जनतालाई नोकरको दर्जा दिनलाई अधिकार । त्यसैले पुखौलीले जस्तो सिकायो पछिका पुर्खाले त्यस्तै सिक्ने छ त्यो जति सुकै उच्च ओहदामा पुगे पनि भन्ने नेपाली उखान सावित हुन गएको छ । अब कस्लाई र कुन पार्टिलाई सच्चा पार्टि हो भनेर जनताले विश्वास लिने त - नयाँ नेपालमा लोकतान्त्रिक नेतालाई नागरिक सर्वोच्चताको खेलाडी बनाई दिएको छ । आफनो मनमा जे उब्ज्यो तेहि बोल्दै हिड्ने रण मैदान भएको छ ।
यो विचित्रको सन्जालबाट नेपाली जनताले कहिले मुक्ति पाउने छ । म फलानो पार्टिको त फलानो पार्टिको भनेर एक आपसमा लड्ने अनि आफनो बलि आफै चडाउने चलनले नेपाली जनतलाई कहिले सम्म सतिको सराप लाग्ने हो । देश सन्चालन जिम्मा लिएका पार्टिका नेताहरु एक आपसमा सहमतिको नारा लिएर देशलाई बर्बाद पार्न तिर लागेका छन् । कोहि क्रान्ति गरेर थाकेको छैन भन्ने त कोहि काग कराउदे गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने कानमा तेल हालेर बस्ने त कोहि रिमोट लिएर आफनो निसाना बाजि मार्न तिर लागेका छन् । त्यसैले हामी निमुखा जनताले एक छाक खान पाएर बन्द हड्ताल र जुलुसमा सामेल भएर पार्टिको झण्डा बोकेर हिड्नु भनेको आफनो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु सरह भई सक्यो । त्यसैले र्सवप्रथम अब बन्ने सविधानमा पहिला कानुन भनेको नेता भनाउदाहरुलाई लाग्ने कसि बनाउन तिर लागेमा नेपालीले नेपाल हाम्रो हो भनेर आङ फुकाएर हिड्न पाउने छ ।
यस पटक, हाँस्नु र हँसाउनु अगाडि हाँसोका बारेमा केही कुराहरु:
किन हाँस्ने ?
हाँस्नुलाई तपाइ केवल क्षणीक मनोरञ्जन वा एकैछिनको टाईमपास मात्र सम्झनुहुन्छ भने त्यो गलत हुनसक्छ ।
हाँस्नु मानिसको लागि शारिरीक र मानसिक दुबैकोणबाट एकदमै लाभदाएक छ । वैज्ञानिक सोधलाई आधार मान्ने हो भने एक पटक हाँस्दा मानिसको अनुहारको सबै मांशपेसीहरु सक्रिय हुन्छन र यदि त्यो हाँसो जोडदार छ भने मानिसको अनुहारका ५३ मांशपेसीहरु, पेट, छाती र अन्य अंगहरु गरी शरिरका करिब करिब पुरै भाग सक्रिय हुन्छन । मानसिक रुपमा यसले पार्ने प्रभाव झनै गहिरो हुन्छ ।
व्यस्त जीवन शैली र तनावपूर्ण दिन गुजार्नेहरुका लागि त हाँस्नु झनै अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण मानिन थालेको छ । विशेष गरी यसले हृदय रोग , मधुमेह व उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरुलाई निकै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरा खोजहरुबाट साबित भैसकेको छ । त्यसैले आजकल धेरै शहरहरुमा हाँस्नेहरुको क्लव र समुह समेत बन्न थालेको छ ।
कसरी र कतिबेर हाँस्ने?
दिनमा आधाघण्टा जत्ती सम्म खुलेर हाँस्न सकेमा शरिरका हार्मोनहरु समेत सन्तुलनमा आउने र मानसिक तनावबाट मुक्त गर्ने कुराहरु धेरै पहिला नै प्रमाणित भैसकेका छन । मुख्य कुरा भनेको आजकलको तनावपूर्ण जीवनमा मानिसहरु हाँस्न समेत कन्जुस्याई गर्छन वा व्यबसायीक जीवनको सफलताको लागी गंभीर हुनुपर्छ भन्ने नकारात्मक धारणाका कारण पनि धेरैले खुलेर नहाँस्ने सम्मका रिपोर्टहरु कते पढेको थीएँ मैले ।
त्यसैले ‘मर्नै परेपछि खुट्टै तानेर” भने जस्तै हाँस्नु छ भने पुरै जिउलाई स्वतन्त्रता दिएर मस्त हाँस्नु शरीरको लागि लाभदायक हुन्छ ।
दिल खोलेर वा पुरै स्वतन्त्र भएर हाँस्नु भनेको यस्तो प्रक्रिया हो जसमा शरीरका प्रत्येक अंग मात्रै आनंदविभोर भएर कम्पन गर्दैन, केही समयको लागी दिमाग पनि विचार शून्य हुन्छ। त्यसैले त जान्नेहरु हाँसोलाई औषधि र ध्यान समेत भएको बताउँछन ।
केही खराबी पनि छ कि ?
हास्य योग वा Laughing therapy को बारेमा अहिले संसारभर नै प्रयोगहरु चलिरहेका छन र प्राय: सबैको सकारात्मक नतिजाहरु आएका छन । अहिले श्रोत त सम्झना भएन तर कतै ईन्टरनेटमै दम वा asthma को रोगीलाई भने धेरै हाँस्नु कहिलेकाही घातक पनि हुन सक्छ भन्ने बारेमा एउटा रिपोर्ट पढेको थिएँ (डिस्क्लेमरको यो लाईन पनि सुरुमै दिउँ कसो
खै त हाँस्ने सर्जाम ?
यत्तिका लामो कुरा गरेर हाँसने सर्जाम दिईएन भने त्यो पनि एउटा धोका हुने छ त्यसैले जाँदा जाँदै केही ताजा चुटकिलाहरु:
नयाँ लेखक पुरानो नाम
प्रकाशक: हेर्नुस, तपाईको किताब त एकदमै राम्रो छ, तर हामी केवल नाम चलेका लेखकका किताब मात्रै प्रकाशन गर्छौं ।
लेखक: त्यो त झनै राम्रो भयो नि !
प्रकाशक: कसरी ? ।
लेखक: मेरो नाम पनि भैरब अर्याल हो ।
बिरामी (नर्ससंग): म तिम्रो प्रेममा यसरी फसेको छु कि मलाई सधैं तिमीसंगै बस्नको लागि मेरो यो रोग कहिल्यै निको नहोस जस्तो लाग्न थालेको छ ।
नर्स: .. तिम्रो यो रोग साँचै पनि कहिल्यै निको हुँदैन अब...
बिरामी: कसरी ?
नर्स: तिम्रो उपचार गर्ने डक्टर मलाई प्रेम गर्छन र तिमिले मलाई मन पराएको कुरा उनलाई पनि थाहा छ ।
कुखुरी र अण्डा
एउटा कुखुरी एउटा किराना पसलमा (जोकै त हो !):
कुखुरी: साउजी मलाई एउटा अण्डा दिनोस त ।
साउ: (छक्क पर्दै) तिमी आफैं अण्डा पार्न सकिहाल्छौ नि !
कुखुरी: त्यो त हो... तर मेरो भालेले भनेको ५ रुपैयाँको लागि फिगर विगार्नु मुर्ख्याई हो रे !
नशाले मस्त लोग्ने आफ्नै स्वास्निलाई चिन्न सक्दैन।
पत्नी- के भन्दैछौ तिमी ? जाँडले मात्तेर मलाई पनि चिन्दैनौ, म तिम्रो पत्नी हुँ पत्नी।
पति- सुन्दरी...! ... तिमीलाई त थाहै छ नि म रक्सी खाएपछि आफ्नो सबै समस्याहरु भुल्छु।
र जाँदा-जाँदै यो एउटा ‘आर्ट जोक’
एकजना पण्डीत नदी किनारमा हिँड्दै थिए । अचानक उसले कुनै मानिस आत्महत्याको लागि नदिमा हामफाल्न लागेको देखे । उनी त्यो मानिसको नजिक गए र भने:
“मर्नु कायरता हो... हेर जिउँदो रहने अनेक कारणहरु हुनसक्छन...”
“के तिमी धर्ममा विश्वास गर्छौ ?”
“ म पनि गर्छु, भन तिमी हिन्दू हौ कि मुश्लिम वा क्रिस्चिएन ?”
“ल हेर, म पनि हिन्दू हुँ.... तिमी द्वैतवादी कि अद्वैत वादी”
“द्वैत वादी !”
“ल ..हेर.. म पनि द्वैतवादी नै हुँ ...तिमी साकार ईश्वर मान्छौ कि निराकार?”
“कस्तो संयोग... म पनि साकार ईश्वर नै मान्छु..., अब भन तिमी शैव हो या वैष्णव?”
‘‘ म पनि त वैष्णव नै हो, बरु तिमी वैदिक जप गर्छौ कि तान्त्रिक?’’
‘‘म पनि वैदिक, वाह !, तिमी उपनिषदलाई बेदको साखा मान्छौ कि भिन्न धार?”
‘‘ म पनि !, अब भन, गायत्री मन्त्र जप्छौ कि अन्य कुनै मन्त्र?’’
‘‘नम: शिवाय मन्त्र !’’ ‘
“ के रे? नम: शिवाय???, मुढ, मित्थ्याचारी, वैष्णव भएर ‘नम: शिवाय’???, तिमी जीवित रहेर पनि जिवनको के सार्थकता भयो त ?”
यती भनेर पण्डित सरासर आफ्नो बाटो लाग्छ ।
- यात्री शेखर
मन लाग्यो गुन्द्रुकसंग, ढिडो खा’को गजल लेख्न ।
गैरी खेतको पर्म तिर्न, मेला गा’को गजल लेख्न ।
ती बर्खामा छानो चुदाँ, थाल थापी हुत्याएको,
बर्षै पिच्छे घरको छानो, खरले छा’को गजल लेख्न ।
गोठालोका गट्टाकुट्टी, आइरहन्छ सम्झनामा,
चोरपुलिस लुकामारी, हैरान् भा’को गजल लेख्न ।
नेप्टी चेप्टी डल्लीलाई, झ्याङ्मा लुकी तर्साउदा,
रामे श्यामे हामीलाई, मज्जा आ’को गजल लेख्न ।
स्कुल छाडी सिनेमामा, रमाउँदा कस्तो मज्जा,
भोली पल्ट छडी खाँदा, दुःख पा’को गजल लेख्न ।
बालापन्का यादहरु, संगालिन्छन् हिजो आज,
स्मृतिमा ती दिनहरु, र्तिमिरा’को गजल लेख्न ।
के वर माग्न मन्दीर गयौ के वर मागी आयौ ?
यो मन्मन्दीर उजाड पारी कुन मन्दीर गयौ ?
त्यै मन्दीरमा पोहर एउटा वर मागिथ्यौ,
उही देउता भाकी तिमीले कसम खाइथ्यौ ।
दुःख पर्दा देउता सम्झी ढोगी हिड्थ्यौ,
सुखी हुँदा ढुङ्गा ठानी लत्याइ हिडिछौ ।
घाउ लाग्दा तिमीलाई मलाई दुख्ने गथ्र्यो,
तिमी कतै गइदिँदा मनको बाघले खान्थ्यो ।
निर्मलमणि अधिकारी -आयोदधौम्य
पुष माघ तेस्तै भयो जेठ भए पनि तापिरहेछु
बारादान अभिसाप जान्दिन चुपचाप थापीरहेछु
अधेरो त छदै थियो अझ प्रदुषणको तुवाँलो छायो
उज्यालो लोभ भो,आगो किनी छाना भरि छापीरहेछु
फुकेका पेटका तर्किक निष्कर्ष कहिले निस्कन्छ
सुक्दै ग'का पेट भित्र चाउरिका रेखा नापिरहेछु
बाद प्रतिबाद घात प्रतिघात खेल्न सिकिदै छ
जिते पनि हारे पनि आँसु जित्ने खेल् अलापिरहेछु
मेरो माटो पसिना माग्छ म पसिना चिन्दिन शायद
नचिने'छि के लाग्छ पानी भनि तेजाब छ्यापिरहेछु
ए रीति भन्नेहरू
यो समाज भन्नेहरू
के दिन सक्छौ मेरा सपनालाई
जो गर्भमै तुहिन पुगे?
के दिन सक्छौ ती भ्रूणहरूलाई
जो सुन्दर संसारको लागि
गर्भाधान हुन आतुर थिए?
म तिनको हत्या गर्न चाहन्नँ
म मतियार हुन चाहन्नँ
कसैको उत्तेजना र रहरको चपेटामा
आफूलाई समाहित गर्न चाहन्नँ।
म राजी खुशीले
संसार निर्माण गर्न चाहन्छु
तिनलाई जीवन्त देख्न चाहन्छु
के दिनसक्छौ ती मेरा सबै रातलाई
जो मेरो अस्तित्वका प्रमाण थिए?
के दिन सक्छौ मेरा आँखालाई
जसमा मेरा खुशी र रहर थिए?
त्यो आँखाको आँसु
जसले गाजलै पखालेको थियो
म त्यस्को रंगबाट भविष्य श्रृजित गर्न चाहन्छु
आडम्बर र विश्वासघातले भरिपूर्ण
अमानुषिक प्रहारहरूप्रति चुनौति दिन चाहन्छु
के दिन सक्छौ मेरा ती अतितलाई?
जो मेरो भविश्यको मार्गदर्शक थिए
फिर्ता गर्न सक्छौ ती मेरा पदछापहरू?
जो नयाँ गन्तब्यमा प्रेरित थिए
मेरो खुशीको हरेक पाटामा प्रश्नचिन्ह किन?
मेरो सफलताका मोडमा कर्तब्यको आहाल किन?
के फिर्ता गर्न सक्छौ ती सबै अवसरहरू?
तिमी फेरी भन्छौ होला,
अब मलाई जवाफ चाहिएकोछ,
संस्कार बनाउने को?!
के नारी मात्रै परंपरा हो?
के नारी मात्रै संस्कार हो?!!
भयो, पुग्यो मलाई,
अब चुडाउन चाहन्छु म त्यस्ता परंपरा
जो मेरा हत्कडी हुन्
ऊखाल्न चाहन्छु ती चलनचल्तीहरू
जसले नेल भई मलाई बाँधेको छ
धेरै भयो बाध्यताका कडिहरुमा जकडिएको!!
च्यात्न चाहन्छु ती भित्ते पोष्टरहरू
जो मेरो अस्मितामाथि रमाइरहेछन।
धेरै भयो परंपराको कारागारमा जेलिएको
फक्रन चाहन्छु म खुल्ला आकाशमुनि
यो समयको माग हो
यो इतिहासको लागि नौलो पानाको शुरुवात हो !!
Posted by: आश्मा
जहिलेदेखि जंगल छोडेर , शहर पाल्नु भो मंगलै मंगल भा’को छ । चुनाबै नलडी , अन्तरिम संसदमा ८५ थान हग्ने पाध्ने हैसियत भएका सांसद पठाउनु भो अनि त्यहीँबाट ५, ७ थानले मन्त्रि खान पनि भेट्टाएकै हुन । शान्ति सम्झौता भैसकेपछि, छापामार भर्ती खुलाउनुभो र आँफ्नै भाषामा , सेनाको संख्या ४,५ गूणा बढी देखाएर क्याण्टोनमेण्टमा थन्काउनुभो भने साँच्चैका तालिमे लडाकूको अगुवाइमा वाइसिएल बनाएर बाहिरै राख्नु भो र यसैको प्रभावले चुनाब पनि जित्न सक्नु भो । हतियार दर्ता गर्ने बेला आयो , हतियार खोलाले बगायो भन्दै ,खै खोलो, सुक्यो’ भन्ने गीत गाएर मनोरञ्जन दिलाउनु भो । शान्ति भएर के हुन्छ र हामी क्रान्ति कै चरणमा छौँ भन्दै , सरकारमा बसेर पनि बाहिर आफ्ना कार्यकर्तालाई बिना बन्धन खुला छाडिदिनु भो र तिनले नै बन्द , हड्ताल, आन्दोलन र क्रान्ति सबै प्रतिपक्षीय राजनीति पनि गरिरहे । यसरी सरकारमा बसेर प्रतिपक्ष पनि आँफै बन्न सफल हुनु भो । कुनै बेला जुवा तास खेल्नेलाई तास खुवाउने क्रान्तिकारी पार्टीका मजदूर नेताको नेतृत्वमा नेपालका क्यासिनोहरूको कारोबारलाई संरक्षण गरिदिनु भो र समानताका आधारमा बिदेशी सरह नेपालीले पनि ‘क्यासिनो जान पाउने’ अधिकारको पक्षमा गजबले उभिनु भो ।
पूँजीवादीको बिरोध गर्दै आफ्नो पार्टीलाई धन आउने हरेक मोर्चामा खटाउनु भो । राजमार्ग र सडकमा ढाट तेर्साएर प्राइभेट कर उठाउने, घर घडेरी र रियल स्टेटको व्यवसायमा एकछत्र कब्जा जमाउने, खोला नालाको बालुवादेखि कवाडी उठाउनेसम्म , स्थानीयदेखि राष्ट्रियसम्मका कर, आयात निर्यात र ठेक्कापट्टामा हतियार र बलका भरमा संस्थागत नियन्त्रण राखेर सरकारी प्रशासन, सेना र प्रहरीको दोहलो काडेर आफ्नो पार्टीको वर्चस्व कायम राख्न अहोरात्र खट्नु भो । छापामारलाई शिविरमा कष्टकर जीवनमा छाडेर , अरबौँको रकम राज्यकोषबाट लिइरहनु भो र यसले हतियार किनेर सत्ता कब्जा गर्ने भाषण गरिरहनु भो । जीवनमा विलाशिता र परिवारवादको फेरोमा राम्ररी बेरिएर पनि , क्रान्तिकारी बनिरहन र गरीबको मसिहा बनेर उम्किरहनुभो । धर्म नै नचाहिने र धर्मको नामै नसुन्ने कम्युनिष्ट भएर पनि , पशुपतिनाथलाई समेत बिच्काउनु भो । हर क्षेत्रमा हात हाल्नु भो , न त कुनै काम नै फत्ते गर्नु भो । अधकल्चो र गिथलगाथलमा मात्र रमाउनु भो । कानून र राज्यको अभिभावक हुने ठाउँमा बसेर कानूनको शासन हुनुपर्छ भन्ने व्यवहार र विचारको हूर्मत लिन सफल हुनुभो । दलीय समीकरणमा सत्ता चलाउनु भो तर , निर्णय आँफूखूशी गर्न खोज्नु भो र यही कारणले राजीनामा दिएर सत्ताबाट हट्नुभो । सत्ताबाट सडकमा झर्नु भो , तर आँफै जिम्मेवारीबाट हटेको बिर्सेर फेरि सत्ता नपाएको झोँकमा बर्बराउन थाल्नुभो । यसै मेसोमा नाच्नुभो , गाउनु भो र कहिले काहीँ सुकुम्बासी उरालेर मच्चाउनुभो र मराउनुभो । १० थरिका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ दिएर लोभ्याउनुभो र केही शिप नलाग्दा १० औँ लाखको रगत बगाउँछु भनेर पनि कुर्लिनुभो ।
सरकारका मन्त्रीहरू बिदेश बाहेक कतै सुरक्षित भएनन् सबै ठाउँमा काला झण्डामा ढुङगा बेरेर कार्यकर्ता देशभरि पठाउनु भो । सरकारमा हुनुहुन्न , तर देशलाई प्रदेश प्रदेशमा बाँडेर , सरकार त के सर्वदलीय सहमतिले पनि गर्न गाह्रो हुने काम आँफ्नै तजबीजमा जात जातलाई भाग बिलोमा बाँडिरहनुभा’छ । देश छ, सरकार छ , कानून छ , प्रशासन छ , सेना छ र पुलिस छ , तर तिनले त केवल जागिर खाने काम मात्र गरिरा”छन , यताउति घुमिरा”छन देश त सरकारमा हुँदा पनि नहुँदा पनि तपाईँले आफ्ना कार्यकर्ताका भरमा नै चलाउनुभा’छ त ! बाहिर बसेपनि सरकारमा बसेपनि देश तपाईँकै खटनपटनमा चलिरहेपछि , तपाईँलाई के कुराले पुगेन र कामरेड नागरिक सर्वोच्चताको नाममा सरकार मागिरहनुभा’छ ? छापामार, वाइसिएल र माओवादी सर्वोच्चताले मुलुक नै खग्रास नियन्त्रणमा परेको यो बेला , माओवादीरूपी बाँसको सेपिलो झ्याँग मुनि यो नागरिक सर्वोच्चताको कलिलो फूल बाँच्ला र कामरेड ? कामरेड, तपाईँको सर्वोच्चता सरकारमा नहुँदा पनि सर्वत्र छाएको छ , बाहिर बसेर पनि भित्र बस्दा हुन नसकेको कुनै काम हुन नसकेको वा बाँकि देखिएको छैन । तपाइँ नै सरकार तपाईँ नै प्रतिपक्ष, तपाईँ नै नागरिक अनि तपाईँ नै सैनिक सर्वोच्चता सबै भएको जनताले बुझेका छन् । माधव नेपालको टोलीले त सरकारी जागिर मात्र खाएका छन् , वास्तविक देश त बन्दूक बोकेका दिनदेखि हरेक भाषा, भाका र अर्थमा तपाईँले चलाउनु भएको छ । जनता सरकारसंग डराउँदैनन् तर अहिलेपनि तपाईँका शानमानदेखि थरहरी हुन्छन् अनि कसरी सोच्नुभो कि तपाईँ सरकामा हुनुहुन्न भनेर ? हाम्रो सरकार त तपाईँ नै हो । कामरेड, ती त नाममात्रका सरकार हुन, कामको सरकार त तपाईँ पो हो अनि किन यो नागरिक सर्वोच्चताको गिडगिडाहटमा सरकार मागिराहनुभा’छ ।सरकारमा बसेर मुलक हाँक्दा केही सीमा र नैतिकताकोपनि लाज राख्नुपर्छ तर , जिम्मेवारीबिहीन तरिकाले देश चलाउन पाइने यो बिद्रोही काइदाको प्रयोग गर्न पाइने भएपछि किन चाहियो त्यो देखावटी कठपुतली सरकार। हरूवाले पाएको सत्ता छोड्न चाहन्नन , जितुवाले हिंसा र हतियार बलले जितेका हुनाले हतियरै नचाएर हिंसाकै बलमा पाइन्छ भन्ठन्छन् ।
मागेर कसैले दिन्छन् ? थुतेर लिनुपर्छ क्रान्तिकारीले , जुन तपाईँले लिनुभएकै छ व्यहारमा सरकाररूपी ‘डन’ बनेर । त्यसो भए कामरेडलाई यो सरकार नै किन चाहियो ?
International Management Consultancy firm Hay Group ले हालै गरेको एउटा आर्थिक सर्वेक्षणले मेरो ध्यान अचम्मै रूपमा खिच्यो । यसको कारण थियो यो सर्वेक्षणले देखाएको बिभिन्न मुलुकमा तल्लो तहको अफिस काम (clerical) गर्ने र उच्च पदका व्यवस्थापकीय ( managerial or executive) तहका जागिरेहरूका बीचमा उनीहरूले हासिल गर्ने तलब सुविधाको भिन्नताको अनुपात ।
हे ग्रुपको यो सर्वेक्षणले मध्य पूर्वका तेल उत्पादक धनी राष्ट्रहरूका- कतार, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, ओमान, बहराइन र साउदी अरेबिया - व्यवस्थापकीय ओहदामा काम गर्ने व्यक्तिहरू आँफ्नो कमाइको भरमा सबैभन्दा बढी पैसा खर्च गरेर जिन्दगी व्यतित गर्ने हैसियत राख्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाएको छ । यसको मुख्य कारण , ती देशहरूमा कार्यरत उच्च ओहदावाला व्यवस्थापक वा म्यानेजरहरूले प्राप्त गर्ने उच्च तलब सुविधा र ती मुलुकमा सरकारलाई फिर्ता बुझाउनु पर्ने न्यून करको व्यवस्था नै हो ।
प्रस्तुत सर्वेक्षणको रमाईलो पक्ष भने यस्तो रहेको छ । यहाँ एशियाका केही चुनिन्दा मुलुकहरूमा हालका वर्षहरूमा अफिस वा फर्महरूमा काम गर्ने तल्लो र माथिल्लो तहका जागिरेहरू बीचमा कायम रहेको तलब सुविधाको अन्तरको अनुपात देखाइएको छ ।
जागिरेहरूको आयको ( कमाइको ) अन्तर दर गुणा ( अनुपात) थोरैदेखि धेरै क्रममा :
प्रस्तुत सर्वेक्षणले पत्ता लगाएको आयको अन्तर अनुपात एशियाका पूँजीवादी मुलुकहरू मध्येका जापान र दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा कम र कम्युनिष्ट मुलुकहरू भियतनाम र चीनमा ( टेबलमा रातो अक्षरमा ) सबैभन्दा बढी रहेको छ भन्ने प्रष्ट देखियो । हामीले अक्सर सुन्ने गरेको तथा कम्युनिष्ट नेताहरूले अक्सर हामीलाई सुनाउने गरेको कम्युनिष्ट मुलुकमा गरीब –धनी बराबर वा समान हुन्छन् र ती देशमा जनताको बीचमा आर्थिक विषमता भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुराको बिरुद्ध माथिको तथ्यांकमा आधारित तथ्यले मजाक गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।
पूँजीवादी भनिएका मुलुकहरूमा बरू , ट्रेड युनियन र श्रमिक वेलफेयर ( कल्याणकारी) कानूनहरूको उचित व्यवस्था हुनाले त्यहाँका नागरिक वा कामदारहरूको हितमा पारदर्शी ढंगले नियम र व्यवहारको कार्यावन्यन र व्यवस्थापन हुने गर्छ , तर कम्युनिष्ट अधिनायकवादको चरित्र भित्र , पारदर्शिता भन्दा नारा र दावालाई चर्को प्रपोगाण्डाका विधिबाट जनतामा छरेर वास्तविकतालाई पर्दा लगाउने कोशिश गरिएको हुन्छ भन्ने सत्य यो कुराले जगजाहेर गरेको छ । अत: आर्थिक समानता र विषमता अन्त्यको खोक्रो दावामा , कम्युनिष्टहरू अरू बढी र सबैभन्दा चर्का पूँजिवादी हुँदै गरेको सत्य तथ्य मात्र यहाँ प्रकट भएको मान्नु पर्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरू बलजफ्ति चन्दा, धान लुट्नेदेखि र महायज्ञबाट धन जम्मा गर्ने समजावादी कर्ममा लिप्त भएको देख्नु परेको भए अनि कम्युनिज्म भित्र समानताको यस खाले धज्जी उडाइको बिडम्नापूर्ण हूर्मत देख्नु वा सुन्नु परेको भए , कार्ल मार्क्स बाजे धुरूधुरू रून्थे होला !